Amaahda Shakhsi ahaaneed ee ugu wanaagsan ee deynta xun ee 2021
Bogga ugu weyn Amaahda Shakhsi ahaaneed ee ugu Fiican Deynta Xun ee 2021
La -dagaallanka sumcadda xun waxay noqon kartaa mid ka mid ah waayo -aragnimada ugu walaaca badan ee qofku ku yeelan karo noloshiisa.
Markaad gasho caqabad maaliyadeed oo degdeg ah, waxaa laga yaabaa inaad rumaysato inaysan suurtogal ahayn inaad u qalanto amaah shaqsiyeed adigoon adeegsanaynin dayn -bixiyeyaal wax -bixin ah. Kiisaska badankood, xaalku sidaas ma aha.
Waa run in marka deyntaadu aysan wanaagsanayn, fursadahaaga amaahda shaqsiyeed ayaa laga yaabaa inay aad u xaddidan yihiin, laakiin taasi micnaheedu maahan inaadan lahayn ikhtiyaar. Xitaa haddii aad leedahay taariikh deyn oo xun, qaar ka mid ah amaahiyeyaasha ayaa laga yaabaa inay ku siiyaan deyn shaqsiyeed.
Maqaalkan, waxaan ku sameynay liis ah amaahda shaqsiyeed ee ugu fiican dadka leh sumcad xun. Si taxaddar leh u akhri!
Waa maxay Amaahda Bad-credit?
Dhibcaha dhibcaha ee hooseeya ama taariikhda amaahda gaaban waa tusaalayaal deyn xun. Lacag-bixinta dambe iyo kaararka deynta ee ugu badan ayaa labaduba hoos u dhigi kara dhibcaha dhibcahaaga.
Amaahda amaahda xun waa ikhtiyaar loogu talagalay dadka ay amaahdoodu ka tarjumayso khaladaad maaliyadeed oo kale ama aan haysan waqti ay ku dhisaan taariikhda deynta. Deymahaan waxaa loo kala saaraa mid la hubo (oo ay taageerto dammaanad sida guri ama baabuur) ama aan la hubin.
Heerarka dulsaarka, khidmadaha, iyo shuruudaha amaahdaani way kala duwan yihiin iyadoo ku xiran deyn -bixiyaha.
Bangiyada kala duwan, ururrada amaahda, iyo amaahiyeyaasha internetka waxay siiyaan amaah dadka leh sumcad xun, laakiin shuruudaha qofka loo tixgeliyo “amaah -bixiye amaah leh” ayaa ku kala duwan hay'ad.
Deyn -bixiyeyaasha qaarkood waxay leeyihiin shuruudo ka adag kuwa kale, marka waa muhiim inaad si fiican u dukaameysato markaad raadineyso amaah.
Waa maxay Amaah Shakhsiyeed?
Amaahda shaqsiyeed waa amaah waqti-gaaban ah oo ay macaamiisha u diyaariyaan bangiyada, ururada amaahda, ama amaahiyaha gaarka loo leeyahay sida kuwa amaahda suuqa ee internetka iyo kuwa amaahda isku faca ah.
Lacagta amaahda waxaa loo isticmaali karaa ku dhawaad ​​ujeeddo kasta, oo ay ku jirto bixinta deyn kale, maalgelinta dayactirka guriga, ama daboolidda kharashaadka qoyska sida arooska ama korsashada.
Amaahda shaqsiyeed, sida amaahda baabuurka ama deyn guri, waxaa dib loo bixiyaa si bille ah, oo leh shuruudaha amaahda oo u dhexeeya 24 bilood illaa 60 bilood ama ka badan.
Amaahda shaqsiyeed caadi ahaan lama hubo, taas oo macnaheedu yahay inaan lagu hubin dammaanad sida baabuur, guri, ama hanti kale.
Maxaa loo tixgeliyaa dhibcaha dhibcaha xun?
Waad hubin kartaa dhibcahaaga dhibcaha adoo adeegsanaya qaabab kala duwan oo dhibcaha dhibcaha, laakiin nidaamka dhibcaha dhibcaha FICO waa midka ugu caansan. Dhibcaha FICO waxay u dhexeeyaan 300 ilaa 850, iyadoo dhibcaha hoose loo arko inay liitaan ama caddaalad yihiin.
Marka loo eego FICO, dhibcaha dhibcaha xun waa mid ku dhaca mid ka mid ah safafka soo socda:
580 illaa 669 waa dhibco dhibco oo wanaagsan.
Dhibcaha liita waxay u dhexeeyaan 300 ilaa 579.
Dhibcaha amaahda oo liidata ama caddaalad ah ayaa adkayn karta in la oggolaado amaah iyo xitaa in la kireeyo guri ama la iibsado guri.
Haddii laguu oggolaado amaah inkasta oo aad leedahay sumcad xun, waxay u badan tahay in lagugu soo dallaci doono dulsaarka ugu sarreeya iyo khidmadaha.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira caadooyin muddo-dheer ah oo aad horumarin karto si aad u hagaajisid dhibcaha dhibcahaaga, sida bixinta biilasha oo dhan bil walba iyo hubinta warbixintaada deynta si joogto ah si aad u qabato khaladaadka.
Akhri Sidoo kale: Waa maxay Amaah Ninja? Sida ay u Shaqeyso, Faa’iidooyinka iyo Qasaarooyinka
Sida Loo Qiimeeyo Amaahda Amaahda Xun
Waa kuwan qodobo la tixgeliyo marka la qiimeynayo amaahda amaahda xun:
1. Tilmaamaha amaahda
Codsiga amaahda shaqsiyeed, deyn-bixiyeyaal badan oo sumcadda xun waxay tixgeliyaan dhibcaha dhibcahaaga, laakiin waxay kaloo tixgeliyaan socodka lacagta caddaanka ah ee billaha ah, sida dakhligaagu u yahay taariikhda shaqada iyo deymaha kale.
Haddii deyn -bixiyuhu leeyahay shuruudda dhibcaha dhibcaha ee ugu yar, waa inaad haysataa ugu yaraan dhibcahaas - doorbidaya mid ka sarreeya - si aad wax uga amaahato.
In kasta oo amaahda amaahda xun ay caadi ahaan leeyihiin dulsaar ka sarreeya deymaha deynta ee wanaagsan, waa inaad weli isbarbar dhigtaa dalabyada si aad u hesho deynta ugu macquulsan. Qiimaha amaahda waxaa loo xisaabin karaa laba siyaabood.
Shuruudaha dib u bixinta amaahda amaahda xun waxay caadi ahaan u dhexeeyaan hal ilaa shan sano. Waqtiga dib -u -bixinta oo dheeraada waxay keenaysaa lacag -bixinno bille ah oo hooseeya, laakiin ha u oggolaan inay aad u dheeraato.
Si kastaba ha ahaatee, muddada dheer ee bixintaada, dulsaarka badan ee aad bixin doonto wadar ahaan. Ujeeddada muddada dib -u -bixinta oo kaa dhigaysa lacag -bixintaada bishiiba mid hooseysa iyadoo waliba kuu oggolaanaysa inaad deynta si dhakhso ah u bixiso.
Amaahda amaahda xun waxaa laga yaabaa in la maalgeliyo isla maalinta aad dalbato ama waxay qaadan kartaa ilaa toddobaad. Inta lagu guda jiro hawsha oggolaanshaha, deyn bixiyuhu wuxuu codsan karaa dukumentiyo dheeri ah, sida W-2s iyo jeegagga lacag bixinta. Xaaladdan oo kale, adiga ayaa mas'uul ka ah waqtiga maalgelinta deynta.
Marka la isbarbardhigayo dalabyada, waqtiga maalgelinta waa inuusan ka hormarin qiimo -jabka, laakiin macluumaadkani wuxuu kaa caawin karaa inaad kala doorato dalabyada isbarbar socda.
5. Khayraadka dhisidda amaahda
Haddii aad leedahay sumcad xun, raadso amaahiye kaa caawin kara fahamka iyo hagaajinta sumcaddaada. Deyn -bixiyeyaasha qaarkood waxay ku siin doonaan dhibcahaaga FICO lacag la'aan waxayna ku siin doonaan waxbarasho maaliyadeed si ay kaaga caawiyaan inaad barato sida loo dhiso amaahda.
Sideen U Heli Karaa Amaah Deynta-xun?
Helitaanka amaah shaqsiyeed oo leh sumcad xun ma aha wax aan macquul ahayn, laakiin waxay u baahan tahay cilmi baaris qoto dheer si loo helo deynta ugu macquulsan.
Waa kuwan tallaabooyin aad qaadi karto haddii aadan haysan deyn wanaagsan oo aad rabto inaad hesho amaah shakhsiyeed.
1. Fiiri dhibcaha dhibcahaaga
Waxaad xaq u leedahay hal warbixin deyn oo bilaash ah sanadkiiba mid kasta oo ka mid ah wakaaladaha warbixinta amaahda, laakiin waxaad hadda ka heli kartaa warbixinnada toddobaadlaha ah AnnualCreditReport.com ilaa Abriil 20, 2022. Hase yeeshee, dhibcaha dhibcahaaga kuma jiraan warbixintaada deynta. Waxaad lacag kaga heli kartaa xafiiska amaahda ama lacag la'aan qaar ka mid ah hay'adaha maaliyadeed.
2. Xaqiiji inaad awoodi kartid inaad dib u bixiso daynta
Baadh miisaaniyadda qoyskaaga si aad u hubiso inaad awoodi karto bixinta daynta dheeraadka ah ee billaha ah.
3. Amaahda shaqsiyeed ee dadka leh sumcad xumo waa la isbarbar dhigi karaa.
Haddii xisaabtaada bangigaaga hadda ama ururkaaga deynta ay meel fiican marayaan, waxaa laga yaabaa inay ku siiso deyn shaqsiyeed.
Waxa kale oo aad u raadin kartaa amaahda shaqsiyeed dadka leh sumcadda xun ee onlaynka ah, laakiin marka hore akhri daabacaadda ganaaxa iyo dib -u -eegista madaxbannaan ee ku saabsan deyn -bixiyaha.
4. Isticmaal u -qalmitaanka
Deyn-bixiyeyaal badan oo intarneedka ayaa kuu oggolaanaya inaad hore u-qalantid deyn ka hor intaadan dalban, taas oo kuu oggolaanaysa inaad aragto haddii aad u-qalantid adigoon samayn jeeg dhibco oo adag.
5. Baadh deymaha sugan
Deyn -bixiyeyaasha qaarkood waxay bixiyaan amaah shaqsiyeed oo sugan, taas oo inta badan sahlan in la helo haddii aad leedahay deyn liidata.
Hantidu waa inay sugtaa amaahdaas, sida gurigaaga ama baabuurkaaga, laakiin caadi ahaan waxay leeyihiin dulsaar hoose.
6. Haddii loo baahdo, ku dar saxiix-wadaage
Saxiixayaashu waxay qaataan qayb ka mid ah mas'uuliyadda amaahda waxaana laga yaabaa in lagaaga baahdo inaad dib u bixiso haddii aad dib uga dhacdo lacag-bixinnada. Lahaanshaha saxiixeeye leh sumcad wanaagsan ayaa kaa caawin karta inaad u qalanto oo aad ku dhaliso dulsaar hoose.
7. Ururi dukumentiyada maaliyadeed
Markaad codsanaysid amaah, waxay u badan tahay in lagaa rabo inaad keento dukumentiyo maaliyadeed sida jeegagga mushaharka, canshuur celinta, iyo macluumaadka shaqada.
8. Diyaar u noqo inaad si fiican u hubiso amaahda.
In kasta oo deyn-bixiyeyaal badan ay horay kuugu qalmi doonaan adiga oo aan lahayn hubin dhibco adag, codsiga dhabta ahi wuxuu sababi doonaa baaritaan deyn, kaas oo si ku-meelgaar ah u dhaawici kara amaahdaada.
Maxay yihiin Amaahda Shakhsiyeed ee ugu Fiican Deynta Xun?
MIN. Dhibcaha DHIBAATOOYINKA
580 FICO iyo 550 Vantage
2 in 5 sano
Avant waa mid ka mid ah amaahiyeyaasha amaahda internetka ugu fiican. Waxay siisaa amaahda guud ee ugu wanaagsan guud ahaan kuwa wax amaahiya ee leh sumcad xun.
Haddii aad u qalanto, waxaad heli kartaa ilaa $ 35,000 oo maalgelin ah. Heerarka dulsaarka ugu hooseeya 9.95 boqolkiiba ayaa la heli karaa.
In kasta oo Avant uu ku dallaco khidmad maamul, xaddiga ugu sarreeya (boqolkiiba 4.75) ayaa laga yaabaa inuu ka hooseeyo waxa aad ka arki karto amaahiyeyaasha kale.
Ma jiro ciqaab lacag bixin ah haddii aad deyntaada hore u bixisay. Heerarka dulsaarka sare marka la barbardhigo waxaad ka heli karto meel kale oo leh sumcad fiican.
Markaad ka fiiriso xulashooyinkaaga amaahda onlayn, baaritaan deyn oo jilicsan ayaa la sameeyaa. Qadarka deynta ugu badan ee ah $ 35,000 — deyn -bixiyayaasha kale ayaa bixiya qaddar deyn oo sarreeya.
Heerka dulsaarka bilowga hoose marka la barbar dhigo deyn -bixiyayaasha kale ee ka sarreeya, laakiin waxaad bixin kartaa lacag badan haddii dhibcaha dhibcahaagu ay ku jiraan dhamaadka hoose ee oggolaanshaha Avant. Khidmadda maamulka oo ah ilaa 4.75 boqolkiiba waxaa laga yaabaa in si toos ah looga gooyo xaddiga deyntaada hore.
Ururkan amaahda ahi waa mid ka mid ah amaahda shaqsiyeed ee ugu fiican dadka leh sumcadda xun. Ururkan oo la aasaasay sannadkii 1952 ayaa ku wajahanaa shirkadaha waaweyn ee farsamaysan.
Marka la barbar dhigo deyn -bixiyayaasha kale ee qaybtan, deyn -bixiyuhu wuxuu leeyahay xaddiga deynta ee ugu sarreeya. Si aad ugu qalanto dulsaarka dulsaarka hoose, waxaa laga yaabaa in loo baahdo amaah-qaate.
Shuruudaha amaahdu way ka dheer yihiin kuwa ay bixiyaan shirkadaha kale ee amaahda shaqsiyeed. Helitaanku wuxuu ku kooban yahay xubnaha oo keliya, in kastoo u -qalmitaanka xubinnimada lagu dhammayn karo Ururka Fayo -dhawrka Maaliyadeed.
Ma jiraan wax ganaaxyo hore -bixin ah haddii aad deyntaada hore u bixiso.
LendingClub waa deyn bixiye isku-dhigga (ama suuqa) 2007. Shirkadan amaahda shaqsiyeed waa madal amaahda ugu weyn ee khadka tooska ah ee amaahda shaqsiyeed, waxay la shaqaysay in kabadan 3 milyan oo macaamiil waxayna maalgalisay in kabadan $ 55 bilyan oo amaah ah.
Sidoo kale waa mid ka mid ah xulashooyinka ugu juquraafi ahaan kala duwan, oo leh awooda amaahda dhammaan gobolada marka laga reebo Iowa iyo dhulalka Mareykanka.
In kasta oo LendingClub ay ku dallacdo APR -yada sare oo aysan bixin sicir -dhimis otomaatig ah, codsadayaashu waxay amaahan karaan wax ka yar $ 1,000. Sidaas darteed, uma baahnid inaad amaahato (oo aad dulsaar bixiso) in ka badan inta aad u baahan tahay.
Intaa waxaa sii dheer, in kasta oo amaahiyayaashu ay ku xaddidan yihiin $ 40,000, tani waa xadka ka sarreeya qaar ka mid ah amaahiyeyaasha kale.
Tani waa mid ka mid ah amaahda shaqsiyeed ee ugu wanaagsan ee deynta xun ee la heli karo. Amaahda amaahdaani waxay u fiican tahay kuwa wax amaahda ah ee doorbida inay ganacsi la yeeshaan amaahiye si fool-ka-fool ah. Halkan, khidmadaha asalka ahi waxay noqon karaan lacag go'an oo ah $ 25 illaa $ 400 ama 1% ilaa 10% xaddiga amaahdaada. Tani waxay ku xiran tahay xaaladda deggenaanshaha.
Sidoo kale, xulashada ikhtiyaarkan sidoo kale waa mid ku habboon maxaa yeelay waxaad ku farxi doontaa muddada dib -u -bixinta oo laga yaabo inay tahay 24, 36, 48, ama 60 bilood.
Waxa kaliya ee aad u baahan tahay si aad u hesho amaahda amaahda xun ee xun waa inaad bixiso macluumaad ku saabsan taariikhdaada deynta, dakhliga, deymaha, iyo dammaanad kasta oo aad rabto inaad bixiso.
Waxaa jira laamo badan oo loogu talagalay dadka wax amaahiya kuwaas oo doorbida inay la kulmaan ama lacag ahaan u qaataan qof ahaan.
Ma jiro ciqaab lacag bixin ah haddii aad deyntaada hore u bixisay.
Si aad u hubiso dalabyada u-qalmitaanka hore, jiidista deynta jilicsan ayaa la isticmaalaa.
Marka la barbardhigo deyn -bixiyayaasha hoose, dulsaarka bilawga ah aad buu u sarreeyaa.
Marka la barbardhigo bixiyeyaasha amaahda shaqsiyeed ee kale, xaddiga amaahda ugu badan ee $ 20,000 waa mid hooseeya.
Marka lagu daro dulsaarka dulsaarka, asalka iyo khidmadaha soo daahay waa la qiimeyn karaa.
PenFed Credit Union waa urur kale oo amaah oo bixiya amaah deyn oo xun. Intaa waxaa dheer, waxay sidoo kale bixiyaan tiro alaab iyo adeegyo bangiyeed ah.
Xaqiiqda kale ee xiisaha leh ee ku saabsan ururkan amaahda ayaa ah inay ku siiyaan lacagihii la codsaday isla maalinta shaqada ee xigta waana inaad bixisaa macluumaad sax ah oo ku saabsan taariikhdaada deynta, dakhliga iyo deymaha markaad codsaneyso deyn, oo lagu daray qofka aad wax la amaahatay haddii ay khuseyso.
Xusuusnow, xaddiga ugu badan ee aad amaahan karto waa $ 35,000 oo cabbirkiisa APR wuxuu ka bilaabmaa 5.99%, kaasoo ah mid aad u tartamaya.
Qof wax amaahiya ayaa kaa caawin kara inaad u qalanto dulsaar hoose.
Marka la barbardhigo bixiyeyaasha amaahda shaqsiyeed ee kale, xaddiga amaahda ugu badan ee $ 35,000 waxaa loo qaadan karaa mid hooseeya.
Xubinnimada waxaa laga rabaa inay hesho deyn shaqsiyeed.
Akhri Sidoo kale: Waa Maxay Waajibaadka Amaahda Damaanad -qaadka ah? Sida ay u Shaqeyso, Faa'iidooyinka iyo Qasaarooyinka
Waxa ku xiga liiskayaga amaahda shaqsiyeed ee ugu fiican dadka leh sumcad xun waa amaahda Rocket.
Waxa xiisaha lihi, Amaahda Gantaalku waa shirkadda walaasha ee Quicken Loans, oo ah amaah -bixiye internet -ka ah oo lagu aasaasay 1985 magaalada Detroit. Waxay bixiyaan maalgelin degdeg ah iyo sidoo kale sicirka boqolleyda sanadlaha ah ee tartamaya (APRs).
Heerarka dulsaarka amaahda shaqsiyeed ee amaahda Rocket -ka ayaa u dhexeeya 5.97 boqolkiiba ilaa 29.99 boqolkiiba, oo ay ku jiraan baaritaanka
Waxaad deynsan kartaa inta u dhaxaysa $ 2,000 iyo $ 45,000 oo leh shuruudaha dib u bixinta 36 ama 60 bilood, taas oo ku xidhan taariikhdaada amaahda iyo dakhligaaga. In kasta oo aad awoodi karto inaad ku mutaysato dhibcaha dhibcaha ee ugu hooseeya 580, astaanta sumcadda deynta oo xoog leh ayaa laga yaabaa inay keento dulsaar hoose.
Awood u leh in la helo amaahda waxay ka soo baxdaa isla maalinta shaqada gudaheeda
Weydiinta amaahda jilicsan marka la hubinayo heerka bilowga ah
Ma jiro ganaaxyo hore u bixin ah
Deyn -bixiyuhu wuxuu beddelaa khidmadda asalka ah oo laga jaray qaddarka amaahda kama dambaysta ah
Looma oggola qof u socdaalayaasha
Lacag -bixin dambe iyo ajuurada lacag -bixinta oo aan ku filnayn
Casriyeynta waa deyn bixiye toos ah oo toos ah oo toos ah oo la bilaabay 2017. Waxay bixisaa amaah shaqsiyeed iyo sidoo kale Kaarka Hagaajinta, oo ah khad amaah.
Waxaa la yaab leh, hadafka alaabteeda amaahda ee qiimaha jaban ama xun ay tahay in la yareeyo khidmadaha.
Iyada oo ku xidhan taariikhdaada amaahda, waxaad hadda u -qalmi kartaa APR -yada u dhexeeya 5.94 boqolkiiba ilaa 35.97 boqolkiiba. Intaa waxaa sii dheer, Casriyeynta waxay bixisaa amaah shaqsiyeed oo u dhexeysa $ 1,000 illaa $ 50,000 oo leh shuruudo u dhexeeya 36 illaa 60 bilood.
Intaa waxaa sii dheer, inkasta oo kor u qaadistu aysan ku qeexin dhibcaha dhibcaha ugu yar websaydhkeeda, shirkaddu waxay tixgelin doontaa dhibcaha dhibcahaaga iyo taariikhda adeegsiga amaahda si loo go'aamiyo u -qalmitaankaaga.
Codsadayaashu waxay eegi karaan qiimahooda iyagoon dhibcahooda dhibcaha saamayn ku yeelan.
Maalgelinta ayaa la heli karaa isla maalinta shaqada ee xigta.
Suurtagalnimada codsashada wada-saxeexa
Deyn -bixiyuhu wuxuu qiimeeyaa khidmadda asalka.
Amaahiyayaasha aan ku bixin mudada nimcada gudaheeda waxaa laga qaadi doonaa lacag dambe oo ah $ 10.
Akhri Sidoo kale: Sharkadaha amaahda ee maxalliga ah ma khiyaamo baa mise waa sharci? Sir aad u baahan tahay inaad ogaato
Ururka Deynta Deegaanka
Ururka amaahda maxalliga ahi waa mid ka mid ah amaahda shaqsiyeed ee amaahda xun ee ugu fiican oo ku habboon kuwa u baahan amaahda doolarka si ay u xalliyaan dhibaatooyinka deyntooda. Ururkan amaahda ahi wuxuu beddel u yahay Deyn Kale oo Lacag -bixin ah. Taas micnaheedu waa, xaalad aad ku haysato arrin adeegsiga PAL, Ururka Deynta Deegaanka ayaa ka shaqayn kara.
Hadda, xaddiga ugu badan ee aad PAL ku amaahan karto waa $ 1,000. Si kastaba ha noqotee, sababta oo ah dulsaarka dulsaarka ayaa ku xaddidan 28%, PALs waa ikhtiyaar ka raqiisan marka loo eego amaahda mushahar bixinta iyo xitaa qaar ka mid ah amaahda shaqsiyeed ee khadka tooska ah ee deynta xun.
Ogsoonow, shuruudaha Ururka Deynta Deegaanka way ku kala duwan yihiin deyn-bixiye, laakiin waxaa ku jiri kara ka-qaybgalka deebaajiga tooska ah, taariikhda lacag-bixinta waqtigeeda leh amaahyada kale ee ururka amaahda, iyo xaqiijinta shaqada.
Heerarka dulsaarka ayaa ka hooseeya kuwa deyn -bixinta iyo qaar ka mid ah amaahda shaqsiyeed ee onlaynka ah.
Lacagta dalabka ee hooseysa waxaa lagu saleeyaa $ 20 waddanka oo dhan.
Xaddiga amaahda ugu badan ee $ 1,000 waxaa laga yaabaa inaysan ku filnayn inay daboosho baahiyahaaga amaahda.
Iyadoo ku xiran dayn -bixiyeha, muddada xubinnimada ugu yar ee ururka deynta ayaa laga yaabaa in loo baahdo.
LendingPoint waa deyn bixiye shaqsiyeed oo ka shaqeeya internetka. Xaruntiisu waxay ku taal Kennesaw, Georgia, waxayna ka shaqeysaa $ 100 milyan oo asal ahaan ah bil kasta iyada oo loo marayo madalkeeda, oo shaqaaleysiisa algorithms xogta iyo teknolojiyadda.
Waa mid ka mid ah amaahda amaahda shaqsiyeed ee ugu xun ee xun oo ah ikhtiyaar tartan loogu talagalay kuwa wax amaahda leh oo leh sumcad caddaalad ah oo doonaya inay amaahdaan illaa $ 36,500 oo dhaqso u helaan maalgelin.
Si aad u dalbato, waa inaad ugu yaraan jirtaa 18 sano, haysataa aqoonsi gobol ama federaal, Lambarka Bulshada, iyo koonto bangi oo magacaaga ku yaal. Waa inaad sidoo kale leedahay dakhli sannadeedka ugu yar $ 2,000 si aad ugu qalanto.
Dhibcaha dhibcaha hoose waa la aqbali karaa haddii aad buuxiso shuruudaha kale ee aqoonta.
Musalafnimadii hore khasab ma aha inay tahay heshiis-jabis haddii la fasaxay ugu yaraan sanad ka hor.
Haddii aad rabto inaad deyntaada waqti hore bixiso, ma jiro wax ciqaab ah.
Marka la barbardhigo deyn -bixiyeyaasha kale, xaddiga ugu badan ee amaahdu wuu hooseeyaa.
Iyada oo ku xidhan gobolka aad ku nooshahay, khidmadaha asalka ahi waxay noqon karaan ilaa 6%.
Heerarka dulsaarka ee sarreeya marka la barbardhigo APR waxaa laga yaabaa in lagu siiyo meel kale haddii aad leedahay sumcad fiican.
Akhri Sidoo kale: Amaahda Bilowga Xirfadda USAA: Ogow tan ka hor intaadan deyn qaadan 2021
Inaad haysato sumcad xumo micnaheedu maahan inaad u jeesato deyn bixiye lacag -bixin ah markii aad xaalad degdeg ah ku jirto. Xitaa haddii aad leedahay dhibaatooyin xagga deynta ah, waa inaad weli isbarbar dhig ku samaysaa dhammaan xulashooyinkaaga la heli karo maxaa yeelay waxaa laga yaabaa in la heli karo xal aad u jaban.
Sida Loo Xayiro Deyntaada 2021
Miisaaniyada Tusmada Daacadnimada | Waa maxay sababta ay tahay inaad u maal gashato.
Maalgalintaada waxay u badan tahay inay khalkhal galisay isbeddelka suuqa saamiyada ee aan kala go 'lahayn. Sababtoo ah faylalkaagu aad buu u…
Dogecoin waa cryptocurrency-ka ay aasaaseen barnaamij-sameeyayaasha software Billy Markus iyo Jackson Palmer sidii “kaftan” jawaab ahaan…
Hagaag, wax badan kuma qaadanayso inaad dhisto taariikhdaada amaahda Haddii aad meel eber ka soo bilaabayso.…